eNasha.com - संसारको ठूलो हात
संसारको ठूलो हात
कहिलेकाहीँ संसारकै सबैभन्दा अनुपम चिज पाउनु पनि श्रापझैँ हुँदो रहेछ । तपाइँलाई नपत्याए चीनका २४ वर्षीय लिउ हुआलाई भेट्टाउँछु, जसले उनको पीडाका बारेमा राम्रैसँग बताउन सक्छन् ।
यिनको हातलाई नाप्ने हो भने एउटा नाङ्लोले पनि भ्याउँदैन, त्यति ठूलो हात छ उनको ! त यिनलाई आफ्नो हात संसारकै ठूलो हातको रुपमा प्रख्याति पाउँदा चित्त बुझेको छैन । किनभने उनलाई आफ्नो हात नै झ्याउलाग्दो भारी भएको छ ।
चीनको जिआङ्सु प्रान्तका यी ठिटाको हात पनि सानोतिनो भए पो ! त्यसैले आफ्नो हातको बढ्दो आकारलाई नियन्त्रण गर्न हालै उनले ११ पाउण्ड (लगभग पाँच किलो) को मासु काटेर फ्याँकेपछि अब सामान्य जीवन बिताउन सक्छु भनेर आशा गरेका छन् ।
जिनमिन इभिनिङ न्यूजका अनुसार, उनको बूढी औँला, चोर र मझौला औँलाहरु जन्मेदेखि नै अलि फरक आकृतिमा आएका थिए । तर पछि यी औँलाहरु यस्तो आकारमा बढ्न थाले कि सबै चकित !
"मेरा बूढी औँला र चोरी औँला यसरी बढे कि ती त मेरो नारीभन्दा मोटो हुन थाले । यसका कारण मेरो देब्रे हातले त कामै गर्न नसक्ने भएँ", उनले बताए- "बाहिर निस्कँदा हातलाई मैले यसरी बर्ेर्नु पर्दथ्यो कि ठूलो हात चाहिँ मान्छेलाई ब्यागझैँ लागोस् !"
सांर्घाई शहरको नाइन्थ पिपल्स नामक अस्पतालमा उनलाई त्यो हातको र्सजरी गर्न सात घण्टा लागेको थियो । उनले आफ्नो हातको आकार ठीक ठाउँमा ल्याउन अर्को छ महिनापछि पुनः र्सजरी गर्नुपर्नेछ ।
"हामीले उनको पाँच वटा औँलालाई ठीक आकारमा ल्याउन र पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउन मिहिनेत गरिरहेका छौँ", अस्पतालका प्रवक्ताले बताए ।
म्याक्रोड्याक्टीली नामक रोगबाट पीडित लिउलाई सो रोगका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना भएको चिकित्सकहरुले जनाएका छन् । यो रोगकै कारण हात र गोडाका औँलाहरु अविश्वसनीय ढङ्गले ह्वात्त बढ्ने चिकित्सकहरुले जनाएका छन् ।
कीर्तिमान उदेकलाग्दो सुन्दरी सेलेब्रिटी गुगल भव्यता माया इन्टरनेट नग्नता हलिउड उदारता मूर्ख्याइँ बलिउड मुद्दा मामिला विज्ञापन परिस्थिति प्रविधि सेक्स उपाय फट्याइँ